u-Van Niekerk ujabulela ukubona abadlali abanesipiliyoni besebenza e-West Indies
Dane van Niekerk in action for the Proteas.
Ukapteni wama-Proteas, u-Dané van Niekerk ukholwa ukuthi i-tour ye-West Indies kuzobanika ithuba elihle lokuthi abadlali abakhulile baveze isipiliyoni sabo kwisimo esingaziwa abaningi eqenjini. Uhambo lokugcina lwe-South Africa e-Caribbean lalungo-2012 futhi bane kuphela abadlali abasakhona eqenjini.
i-tour izoba nemidlalo emthathu ye-ICC Women’s Championship (IWC) One-Day International (ODI) ne-T20 series yemidlalo emihlanu. Kuzodlala indima enkulu kwizinhlelo zezivakashi ukuthola amaphuzu ukuze angene kwi-2021 ICC Women’s World Cup e-New Zealand kanye nokuhlela amalungiselelo e-ICC Women’s T20 ehamba yodwa e-West Indies ngo-November.
“Ngicabanga ukuthi kuzoba i-tour enzima futhi enenselelo,” kuphawul ukapteni. “Isendaweni enhle, angeke uyihambe indawo enhle uma ukwi-tour yekhilikithi, kodwa uma kufika kumsebenzi wekhilikithi, i-West Indies izohlola umdlali ongaphakathi kuwena njengezindawo ezimbalwa. Ukushisa, isifudumezi, ama-pitch abo amangazayo, kugcina kwinto eyodwa efuna okuningi kumdlali futhi yingakho ngilindele ukubona ukuthi abadlali abadala bazokwenzani kwinselelo efana nale.”
Abadlali abadlala u-Van Niekerk akhuluma ngabo usekela kapteni u-Chloe Tryon, u-Mignon du Preez no-Marizanne Kapp, futhi ukholwa ukuthi izingqondo zika-Lizelle Lee, u-Masabata Klaas no-Suné Luus kuzodlala indima enkulu ekuhlanganiseni iqembu elincane.
“Ngizobheka kubona ukuthi basize ekuholeni abadlali abancane futhi baluleke kwindlu yokushintshela,” esho eqhubeka. “Sinabadlali abane asebadlala lapha futhi nabanye abadlali abadala abadlala emhlabeni wonke futhi bayazi ukuthi kunjani ukujwayela isimo esinzima. Sibusiswe ngabadlali abancane abakulindele ukuqala futhi kumele sithathe lowo mfutho futhi siwukhiphe ngokucabanga.”
Ama-Proteas anabadlali abane abathole iziqu kwiqembu le-South African Emerging abadlala kahle ukuze bakhethwe kwi-season edlule. u-Saarah Smith, u-Tumi Sekhukhune, u-Robyn Searle no-Faye Tunnicliffe bayamujabulisa u-Van Niekerk.
“Kuyagqugquzela ukubona ukuthi mangakhi amathalente afikile eminyakeni embalwa edlule nokhu i-CSA ithuthukisa abadlali abasezingeni eliphezulu,” esho enaba. “Ngikulindele ukubona ukuthi azokwenzani lamantombazane futhi nokuthi umuntu nomuntu uletha okuhlukile futhi ukuhluka kwizidingo zeqembu kungcono. Lokho, kuhlangene namathalente abasha esinawo ku-Laura Wolvaardt, u-Riaisibe Ntozakhe no-Zintle Mali yilokho okudingekayo emaphushweni akapteni. Kuzoba ikhanda elihle ukuba nalo kulaba abakhethayo uma kumele bakhethe amaqembu kuyela phambili.”
“Kuningi esikudlalelayo kule-tour futhi ngithemba ukuthi ukulingana kwabadlali abasha kwisipiliyoni kuzosinika i-‘X-Factor’ esiyibhekayo ngoba i-West Indies njengeqembu kwisimo sasekhaya kuzoba inselelo enkulu.”
Abadlali abathathu abasha kwi-tour yama-Proteas women aya e-West Indies i-CSA ibamba ikhempu yabesifazane kwabaphosa ngokushesha u-Moreeng ubheka uhambo lase-England u-Moreeng uzohlasela nokungafani kulandela i-Tri-Series ephoxayo i-South Africa ‘isendaweni enhle’ ngaphambi komdlalo obalulekile we-Tri-Series ne-New Zealand Injabulo njengoba i-South Africa ibheka i-ICC World T20 kulonyaka Nackerdien pleased with Proteas Women’s improved performance against England u-Luus no-Lee bagcina amathemba e-SA kwi-Tri-Series i-South Africa ibheke ukubuyela isimweni emuva kokuyiqala kabi i-tri-series Ikhulu la-Beaumont lihlela ukunqoba okuphule irekhodi kwi-England kwi-T20I yesibili i-South Africa iqonde ukusebenzisa izifundo kwi-T20 tri-series